Sida loo isticmaalo VPN taleefanka gacanta? | Androidsis
Miguel Gaton | 27/07/2021 10:40 | La cusbooneysiiyay 27/08/2021 10:57 | Amniga
Xiriirinta mar walba waa lama huraan maanta waana qayb ka mid ah hawl -maalmeedka dad badan oo isticmaala intarneedka si ay u fuliyaan macaamilkooda ganacsi, wadaagaan macluumaadka oo ay ku raaxaystaan ​​baaxadda ballaaran ee shabakadaha bulshada; laakiin waad ogtahay sida loo isticmaalo VPN taleefanka gacanta? Tani waa lama huraan si loo hubiyo amniga xogtaada shaqsiyeed, ogow.
Marka xigta waxaan kuu sheegi doonnaa waxa shabakadda daalacashada khaaska ah loogu talagalay iyo meesha aad awooddo soo dejiso VPN lagu kalsoonaan karo.
1 Waa maxay xiriirka VPN maxaase loogu talagalay?
2 Sideed ugu isticmaashaa VPN moobilkaaga?
Waa maxay xiriirka VPN maxaase loogu talagalay?
Markaad gasho internetka oo dhan waxqabadkaagu wuxuu ka diiwaangashan yahay IP -ga deegaankaaga, kuu oggolaanaya inaad wadaagto faylasha, fuliso dhammaan noocyada kala duwan ee habraacyada ama si fudud ula xiriirto. VPN -ku waa teknolojiyad isku xirta ujeeddadiisu tahay in la xafido xogtaada shaqsiyeed markaad daalacanayso shabakadda, sidaas darteed iska ilaaliso inay galaan dadka aan la oggolayn.
IP -gaagu wuu qarsoon yahay oo ficil ahaan raad kuma reebtid taasi waxay muujineysaa waxa hawshaadu ku jirtay internetka. Tan, dhammaan isticmaaleyaasha idman ayaa si ammaan ah isugu xiri kara una beddeli kara xogta, iyagoo adeegsanaya kanaal dhijitaal ah oo khaas ah kaliya waxaad u baahan tahay inaad lahaato magac isticmaale iyo eray sir ah.
Sideed ugu isticmaashaa VPN moobilkaaga?
VPN -yada waa aalado ilaalin oo aad u adeegsan karto wanaajiso khibradaada daalacashada, sidaas darteed fidinta isku xirka deegaankaaga xitaa haddii isticmaaleyaashu aysan jidh ahaan isku xirnayn, sidii hore loo isticmaali jiray.
Si fudud haddii loo dhigo, taraafikada shabakaddu weli waa joogto Waxaa laga hagayaa aaladdaada ISP ama bixiyaha internetka iyada oo loo marayo VPN aad iibsatay, sida tan ay bixisay Surfshark; Tani waxay tusinaysaa inaad yeelan doonto cinwaan IP kale iyo dhammaan adeegyada uu bixiyo serverkan.
Adigoo ku adeegsanaya VPN mobiladaada waxaad fursad u leedahay waddo marin u ah dal kasta oo ku raaxayso waxyaalo laga yaabo inaan laga heli karin kuwaaga. Tusaalaha tan waxaa daliil u ah adeegsadayaasha isticmaalaya xiriirada VPN ee Shiinaha ilaa iska ilaali xannibaadyada soo noqnoqda ee heerka Yurub.
Si aad u isticmaasho VPN leh nidaamka Android oo laga heli karo mobilo badan, waxaa lagama maarmaan ah kaliya inaad gasho qaybta tilmaamaysa Shabakad iyo Internet, dooro qaabeynta VPN oo geli dhammaan xogta ay codsadaan, sida:
Magaca ama aqoonsi shaqsiyeed
Magaca isticmaalaha ee aad u adeegsan doontid helitaanka adeegga
Si aad ugu xidhnaato astaantaas, waa inaad gujisaa oo waxaa loo diiwaangelin doonaa qayb ka mid ah dejintaada mudnaanta leh, haddii kale, xidhiidhkaagu wuxuu sii ahaan doonaa kan aad inta badan isticmaasho.
Nasiib wanaag, VPN -kan ayaa leh codsi u gaar ah oo wax dhib ah kuma yeelan doontid gelitaanka astaantaada, kaliya waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso oo aad bilowdo inaad ku raaxaysato adeegyadeeda, isla markiiba ilaaliso noloshaada dhijitaalka ah. Hal -ku -dheggoodu waa: siiyaan marin -u -gaar ah internet furan, si aadan marna khatar gelin macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Xusuusnow in mobile, sida aaladaha kale ee elektiroonigga ah sida kiniiniyada, kombiyuutarada ama iPod -yada waxay u nugul yihiin inay weeraraan dambiilayaasha internetka oo had iyo jeer isha ku haya, raadinaya baylahda amniga.
Iyada oo leh VPN wanaagsan waxaad xannibi doontaa weerarkooda oo aad qarin doontaa IP -gaaga si aad u diri karto ama aad ku heli karto macluumaadka qaab qarsoon, oo aan marin u lahayn qof kasta oo aan loo idmin.
Ma jiraan xayeysiisyo dhib badan, furin, phishing, ama xatooyo aqoonsiAaladan amniga ee xoogga badan waxaad awood u yeelan doontaa inaad si xor ah ugu raaxaysato adeegyada internetka oo aad gasho bogagga shabakadaha kala duwan iyada oo aan lahayn xannibaadyo ama xannibaadyo.
Dambiilayaasha internetka ayaa had iyo jeer ah raadinta aaladaha nugulMaaddaama ay yihiin kuwa ugu horreeya liiskaaga ee lagu qaado fal -dambiyeedkaaga, ka horjoogso adoo adeegsanaya Surfshark VPN.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Sidee loo adeegsadaa VPN taleefanka gacanta?
Reface, codsiga ugu fiican ee lagu abuuro qoto-dheer oo qoto-dheer